ထိုင်ဝမ်တွင် ၄၇ နှစ်ကြာလက်ကိုင်လေကိရိယာနှင့်အဆုတ်ဆိုင်ရာကိရိယာများ | GISON
GISON MACHINERY CO., LTD. - GISON Machinery Co., Ltd. Air Tools / Pneumatic Tools ၏အတွေ့အကြုံနှင့် ၄၇ နှစ်ကျော်တာ ၀ န်ထမ်း ၄၇ နှစ်ကျော်ရှိသည် GISON ၂၄ နှစ်အတွင်း ISO-9001 အရည်အသွေးစနစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ GISONAir Tools / Pneumatic Tools ကိုကျွမ်းကျင်စွာထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Air Tools အားလုံးကို TAIWAN တွင်ပြုလုပ်သည်။
သစ်သားထုတ်လုပ်ရေးအတွက် Air Tools များ
2020 GISON ကျောက်၊ စကျင်ကျောက်၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိုစွတ်သောလေကိရိယာများ
2018 GISON ကျောက်၊ စကျင်ကျောက်၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိုစွတ်သောလေကိရိယာများ
၂၀၁၅ GISON ကျောက်၊ စကျင်ကျောက်၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိုစွတ်သောလေကိရိယာများ
Home ကြှနျုပျတို့အကွောငျး သတင်း - ပြပွဲ
သတင်း - GISON Machinery Co., Ltd.
GISONစက်ပစ္စည်း။ , Ltd ။ ထိုင်ဝမ်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ (၄၆) နှစ်ကျော်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းတင်ပို့ခြင်း၊ လေသုံးကိရိယာများ၊ အကောင်းဆုံးသော Air Tools / Pneumatic Tools များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့အားအချိန်တိုအတွင်းရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည်။ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ ၀ ယ်ယူသူများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် Air Tools OEM / ODM မှလေလံပစ္စည်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ငါတို့၏လေကိရိယာ၊ လေကိရိယာ၊ အဆုတ်ကိရိယာ၊ အဆုတ်ကိရိယာများကိုစိတ်ဝင်စားလျှင် ယခု ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ် ပါ ။
[ပြပွဲ] 2021 China Xiamen International Stone Fair
တရုတ်တွင် coronavirus ဖြစ်ပွားမှုအသစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, ဝတ္ထု coronavirus ပြန့်ပွားများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လက်ရှိအခြေအနေအပေါ်အခြေခံပြီး, ထိုဆုံးဖြတ်ချက် Xiamen ကျောက်ခေတ်တရားမျှတသော 2020, မူလက Xiamen အတွက်မတ်လ 16-19 ရက်နေ့တွင်စီစဉ်ထား, 2021. ရန်ရွှေ့ဆိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစည်းရုံးရေးကော်မတီတို့ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်Xiamen ကျောက်တုံးပြပွဲသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောက်တုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးနှင့်အခြားဆက်စပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ စျေးကွက်အသစ်များကိုအမြတ်ထုတ်။ ကျောက်တုံးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံး၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုရှေ့တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်သည်။သင်ကြည့်ချင်သောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးဤနေရာတွင်ရှိသည်။ * Block & SLAB ကျောက်၊ ကျောက်စရစ်၊ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ၊ ကျောက်ထည်၊ ကျောက်တုံးတူးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ လမ်း ဖောက် ခြင်း၊ စက်ကိရိယာများစိန်သုံးကိရိယာများ၊ ခြောက်သွေ့သောဆွဲထားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စစ်ဆေးရေးကိရိယာများ ... * ကျောက် ထုတ်ကုန်များ ကောင်တာ၊ ပုံကျောက်၊ ကျောက်ပရိဘောဂ၊ ကျောက်တုံးများထုထည်၊ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများ၊ ရှုခင်းများကျောက်တုံးများ၊ မိုးပန်းပွင့်ကျောက်၊ cobblestone၊ mosaic ... * STONE CONSERVATION ပွန်းပဲ့။ ကြိတ်ခွဲသောကိရိယာများ၊ သန့်ရှင်းရေးစက်ပစ္စည်းများ၊ စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းများ၊ ကော်၊
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၂၀ (၁၀ / ၁၃-၁၀ / ၁၇)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်များတွင်ထုတ်လုပ်သည့် 'Made in Taiwan' ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အဓိကကုန်သွယ်မှုအချက်အချာနေရာတစ်ခုအဖြစ်ထိုင်ဝမ်ဟာ့ဒ်ဝဲပြပွဲ (THS) သည်ယခုနှစ် ၂၀ တွင်ထုတ်ဝေရန်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ်၏ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့် hardware ပစ္စည်းများနှင့်တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ၀ ယ်သူများဝယ်ယူရန်ယှဉ်ပြိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုပြသသောကြောင့်အဆိုပါပြပွဲသည်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူ ၄၃၀ ကို OEM၊ အောက်တိုဘာ ၁၃-၁၅ ရက်မှသုံးရက်ကြာလျှင်၊ Taichung International Exhibition Centre သည်တိုက်ရိုက်မှာကြားမှုများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ကဏ္multiပေါင်းစုံလျှောက်လွှာများအတွက်အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်တင်းပေးလိမ့်မည်။
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ 2019 (၁၀ / ၁၇-၁၀ / ၁၉)
၁၉ နှစ်ကြာကတည်းကထိုင်ဝမ်ဟာ့ဒ်ဝဲပြပွဲ (THS) သည်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်၏ဟာ့ဒ်ဝဲစက်မှုလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပြခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများပြုလုပ်သောနှစ်ပတ်လည်ပွဲဖြစ်သည် B2B ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့် THS သည်ကြီးမားသောထိုင်ဝမ်ဟာ့ဒ်ဝဲစျေးကွက်ကိုသိရှိရန်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အမြောက်အမြားတင်ပို့ရောင်းချနေသောနောက်ဆုံးပေါ်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိသူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ခန့်မှန်းခြေ ပြသနာ ၄၀၀ သည်ဆန်းသစ်တီထွင်သောထုတ်ကုန်များကိုအမျိုးအစား ၈ မျိုး ခွဲ၍ ပြသမည်ဖြစ်ပြီး hardware နှင့် DIY ကဏ္ sector အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ထိုင်ဝမ် Hardware Show Show ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ Taichung ရှိ Greater Taichung International Expo Centre တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ပြပွဲကာလအတွင်းဟိုတယ်တည်းခိုရန်နေရာနှင့်လေဆိပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အစိုးရထောက်ပံ့သောထောက်ပံ့ငွေအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ visitors ည့်သည်များလျှောက်ထားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
[ပြပွဲ] 2019 Xiamen Stone Fair (03 / 06-03 / 09)
Xiamen Stone Fair 2019 သည်သင်တို့အတွက်ပြခြင်းဖြစ်သည်! ၁၈ ကြိမ်မြောက် Xiamen Stone Fair ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိတရုတ်နိုင်ငံ၊ Xiamen Stone Fair သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောက်တုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးနှင့်အခြားဆက်စပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ စျေးကွက်အသစ်များကိုအမြတ်ထုတ်။ ကျောက်တုံးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံး၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုရှေ့တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်သည်။သင်ကြည့်ချင်သောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးဤနေရာတွင်ရှိသည်။ * Block & တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ ကျောက်, စကျင်ကျောက်, ထုံးကျောက်, သဲကျောက်, မီးတောင်ကျောက်, အတုကြောကျခဲ ... ကျောက်ခေတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး, processing, လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်တင်, * စက်မှုလယ်ယာ Tools များ စိန်သုံးကိရိယာများ၊ ခြောက်သွေ့သောဆွဲထားသည့်ပစ္စည်းများ၊ စစ်ဆေးရေးကိရိယာများ ... * ကျောက်တုံးများထုကျောက်ပြား၊ ကျောက်တုံးပရိဘောဂ၊ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများ၊ ပန်းပု၊ ကျောက်တုံးကျောက်၊ မိုးရွာသောကျောက်တုံး၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ၊ ကျောက်စိမ်းများ * ကျောက်တုံးများကျောက်စရစ် နှင့်ကြိတ်ကိရိယာများ၊ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ, စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ, ကော်, အရောင် ...
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၈ (၁၀ / ၁၇-၁၀ / ၁၉)
၁၈ နှစ်ကြာကတည်းကထိုင်ဝမ်ဟာ့ဒ်ဝဲပြပွဲ (THS) သည်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်၏ဟာ့ဒ်ဝဲစက်မှုလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပြခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအတွက်နှစ်စဉ်ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည်။ B2B ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့် THS သည်ကြီးမားသောထိုင်ဝမ်ဟာ့ဒ်ဝဲစျေးကွက်ကိုသိရှိရန်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အမြောက်အမြားတင်ပို့ရောင်းချနေသောနောက်ဆုံးပေါ်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိသူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည်။ ခန့်မှန်းခြေ ပြသနာ ၄၀၀ သည်ဆန်းသစ်တီထွင်သောထုတ်ကုန်များကိုအမျိုးအစား ၈ မျိုး ခွဲ၍ ပြသမည်ဖြစ်ပြီး hardware နှင့် DIY ကဏ္ sector အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ထိုင်ဝမ် Hardware Show Show ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ Taichung ရှိ Greich Taichung International Expo Centre တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ပြပွဲကာလအတွင်းဟိုတယ်တည်းခိုရန်နေရာနှင့်လေဆိပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အစိုးရထောက်ပံ့သောထောက်ပံ့ငွေအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ visitors ည့်သည်များလျှောက်ထားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
[ပြပွဲ] 2018 ခုနှစ် Xiamen Stone Fair (03 / 06-03 / 09)
Xiamen Stone Fair 2018 သည်သင့်အတွက်ပြပွဲပါ။ ၁၈ ကြိမ်မြောက် Xiamen Stone Fair ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိတရုတ်နိုင်ငံ၊ Xiamen Stone Fair သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောက်တုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးနှင့်အခြားဆက်စပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ စျေးကွက်အသစ်များကိုအမြတ်ထုတ်။ ကျောက်တုံးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံး၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုရှေ့တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်သည်။သင်ကြည့်ချင်သောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးဤနေရာတွင်ရှိသည်။ * Block & တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ ကျောက်, စကျင်ကျောက်, ထုံးကျောက်, သဲကျောက်, မီးတောင်ကျောက်, အတုကြောကျခဲ ... ကျောက်ခေတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး, processing, လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်တင်, * စက်မှုလယ်ယာ Tools များ စိန်သုံးကိရိယာများ၊ ခြောက်သွေ့သောဆွဲထားသည့်ပစ္စည်းများ၊ စစ်ဆေးရေးကိရိယာများ ... * ကျောက်တုံးများထုကျောက်ပြား၊ ကျောက်တုံးပရိဘောဂ၊ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများ၊ ပန်းပု၊ ကျောက်တုံးကျောက်၊ မိုးရွာသောကျောက်တုံး၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ၊ ကျောက်စိမ်းများ * ကျောက်တုံးများကျောက်စရစ် နှင့်ကြိတ်ကိရိယာများ၊ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ, စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ, ကော်, အရောင် ...
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၇ (၁၀ / ၁၁-၁၀ / ၁၃)
ထိုင်ဝမ်၏အကြီးမားဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲအုပ်စု၏အလယ်ဗဟိုတွင်ထူးခြားစွာရှာဖွေခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ထိုင်ဝမ် - အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်။ ထိုင်ဝမ်သည်ဟာ့ဒ်ဝဲလုပ်ငန်း၏ကမ္ဘာ့ပို့ကုန်တန်ဖိုးတွင်အဆင့် ၃ တွင်ရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ ထူးခြားသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်များ၊ ချက်ချင်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကွန်ယက်များသည်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူများကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်သူများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်လာစေသည်။ ထုတ်ကုန်များ။
[ပြပွဲ] 2017 Xiamen Stone Fair (03 / 06-03 / 09)
Xiamen Stone Fair 2017 သည်သင့်အတွက်ပြပွဲပါ။ ၁၇ ကြိမ်မြောက် Xiamen Stone Fair ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိတရုတ်နိုင်ငံ၊ Xiamen Stone Fair သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောက်တုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်တုံးနှင့်အခြားဆက်စပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးပလက်ဖောင်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ စျေးကွက်အသစ်များကိုအမြတ်ထုတ်။ ကျောက်တုံးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အားလုံး၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုရှေ့တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်သည်။သင်ကြည့်ချင်သောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးဤနေရာတွင်ရှိသည်။ * Block & တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ ကျောက်, စကျင်ကျောက်, ထုံးကျောက်, သဲကျောက်, မီးတောင်ကျောက်, အတုကြောကျခဲ ... ကျောက်ခေတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး, processing, လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်တင်, * စက်မှုလယ်ယာ Tools များ စိန်သုံးကိရိယာများ၊ ခြောက်သွေ့သောဆွဲထားသည့်ပစ္စည်းများ၊ စစ်ဆေးရေးကိရိယာများ ... * ကျောက်တုံးများထုကျောက်ပြား၊ ကျောက်တုံးပရိဘောဂ၊ ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများ၊ ပန်းပု၊ ကျောက်တုံးကျောက်၊ မိုးရွာသောကျောက်တုံး၊ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲ၊ ကျောက်စိမ်းများ * ကျောက်တုံးများကျောက်စရစ် နှင့်ကြိတ်ကိရိယာများ၊ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများ, စောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ, ကော်, အရောင် ...
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၆ (၁၀ / ၁၂-၁၀ / ၁၄)
[ပြပွဲ] 2016 Xiamen Stone Fair (03 / 06-03 / 09)
Xiamen Stone Fair 2016 - International Stone Fair နှင့် International Tools and Machinery Fair၊ ကျောက်စိမ်းနှင့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိရက်များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည် ။ ပီပီ - ရှေးခယျြနမူနာ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျောက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်နည်းစနစ်များကိုရယူရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြပွဲတစ်ခုထက်ပိုသောပွဲသည်တက်ရောက်သူများအားသတင်းအချက်အလက်၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြိုင်ဘက်ကင်းစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှကျွမ်းကျင်သူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကအကျဆုံးဆွေးနွေးမှုများတွင်အဖြေရှာခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများရယူခြင်းတို့တွင်ပါဝင်ကြသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါ၊ အကောင်းမြင်ပါ၊ XIAMEN STONE Fair 2016 နှင့်အတူပါ!
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၅ (၁၀ / ၁၂-၁၀ / ၁၄)
ထိုင်ဝမ်၏စက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာသို့မိတ်ဆက်ခြင်း - ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ (THS) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂ မှ ၁၄ ရက်အထိမဟာ Taichung International Expo Centre တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည် THS ၏ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုင်ဝမ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကိရိယာများတင်ပို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောထိုင်ဝမ်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များမှ ၀ ယ်ယူသူများသည်ပြပွဲသို့တက်ရောက်သည့်အခါထူးခြားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလို။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သူတိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်။
[ပြပွဲ] Marmomacc ၂၀၁၅ - ကျောက်တုံးဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ - ကျောက်တုံးပြပွဲ (09 / 30-10 / 03)
Marmomacc ကျောက်တုံးလုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်ချိန်းဆိုမှု - စ ကျင်ကျောက်ကဏ္operatorsမှအော်ပရေတာများ၊ စက်ယန္တရားမှပစ္စည်းကိရိယာများအထိ၊ လုပ်ကွက်များမှပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကျောက်တုံးပြုပြင်ခြင်းအထိ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ကန်ထရိုက်ကဏ္sectorsမှကျွမ်းကျင်သူများအပြင်အောင်မြင်မှုရရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများအတွက်နိုင်ငံတကာပြပွဲ အထူးပြုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်အခြေအနေတွင်။
[ပြပွဲ] 2015 Xiamen Stone Fair (03 / 06-03 / 09)
Xiamen Stone Fair 2015 - International Stone Fair နှင့် International Tools and Machinery Fair - ကျောက်တုံးနှင့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိနေ့များတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည် ။ ပီပီ - ရှေးခယျြနမူနာ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျောက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်နည်းစနစ်များကိုရယူရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြပွဲတစ်ခုထက်ပိုသောပွဲသည်တက်ရောက်သူများအားသတင်းအချက်အလက်၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြိုင်ဘက်ကင်းစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှကျွမ်းကျင်သူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကအကျဆုံးဆွေးနွေးမှုများတွင်အဖြေရှာခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများရယူခြင်းတို့တွင်ပါဝင်ကြသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါ၊ အကောင်းမြင်ပါ၊ XIAMEN STONE FAIR 2015 နှင့်အတူပါ။
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၄ (၁၀ / ၂၁-၁၀ / ၂၃)
ထိုင်ဝမ်၏စက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာသို့မိတ်ဆက်ခြင်း - ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ (THS) ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၁ မှ ၂၃ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် Greater Taichung International Expo Centre တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည် THS ၏ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုင်ဝမ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကိရိယာများတင်ပို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောထိုင်ဝမ်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များမှ ၀ ယ်ယူသူများသည်ပြပွဲသို့တက်ရောက်သည့်အခါထူးခြားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလို။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်သူတိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်။
[ပြပွဲ] ၂၀၁၄ Marmomacc - ကျောက်တုံးဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ - ကျောက်တုံးပြပွဲ (09 / 24-09 / 27)
[ပြပွဲ] 2014 Xiamen Stone Fair (03 / 06-03 / 09)
Xiamen Stone Fair 2014 -International Stone Fair နှင့် International Tools and Machinery Fair - ကျောက်တုံးနှင့်စက်ယန္တရားအပိုင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည် ။ ပီပီ - ရှေးခယျြနမူနာ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျောက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်နည်းစနစ်များကိုရယူရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြပွဲတစ်ခုထက်ပိုသောပွဲသည်တက်ရောက်သူများအားသတင်းအချက်အလက်၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြိုင်ဘက်ကင်းစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှကျွမ်းကျင်သူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကအကျဆုံးဆွေးနွေးမှုများတွင်အဖြေရှာခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများရယူခြင်းတို့တွင်ပါဝင်ကြသည်။ အပြိုင်အဆိုင်ရှိပါ၊ အကောင်းမြင်ပါ၊ XIAMEN STONE FAIR 2014 နှင့်အတူပါ။
[ပြပွဲ] ၂၀၁၃ တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းပြပွဲ (၁၁ / ၂၆-၁၁ / ၂၈)
China International Hardware Show (CIHS) သည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားစုံလင်သောကုန်သည်များနှင့် ၀ ယ်သူများကိုအထူးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် DIY ကဏ္entireများအားလုံးအတွက်အာရှ၏ထိပ်တန်းကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဂျာမနီနိုင်ငံရှိ INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE ပြီးနောက်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲပြပွဲအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြသနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ CIHS သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများအသင်းချုပ် (IHA)၊ ဂျာမနီကိရိယာထုတ်လုပ်သူများအသင်း (FWI) နှင့်ထိုင်ဝမ်လက်ကိုင်ကိရိယာများစသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ ဦး စားပေးသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ အသင်း (THMA) ။
[ပြပွဲ] ထိုင်ဝမ်စက်ပစ္စည်းပြပွဲ ၂၀၁၃ (၁၀ / ၂၁-၁၀ / ၂၃)
၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၁ မှ ၂၃ ရက်အထိ (၁၃.၃.၂၀၁၃) တွင်ထိုင်ဝမ်သုံးပစ္စည်းပြပွဲ (THS) သည်အထင်ရှားဆုံးအာရှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Canton Fair, THS 2013 ၏ရက်စွဲကိုမဟာဗျူဟာအရဆက်စပ်မှုရှိသည့်ထိုင်ဝမ်ရှိထိုင်ဝမ်ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ရုံများကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တည်ရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ ဥယျာဉ်နှင့်အပြင်အဆောက်အအုံ၊ မော်တော်ယာဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပစ္စည်းနှင့်ထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်အမျိုးအစားရှစ်ခုအားဆက်လက်ပြသခဲ့သည်။ အသစ်စက်ရုံလည်ပတ်မှုဝန်ဆောင်မှု။ သင်၏စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ယခု THS 2013 ကိုဆက်သွယ်ပါ။
[ပြပွဲ] ၂၀၁၃ Marmomacc - ကျောက်တုံးဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ - ကျောက်တုံး (09 / 25-09 / 28)
[ပြပွဲ] ၂၀၁၃ တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများပြပွဲ (03 / 12-03 / 14)
[ပြပွဲ] ၂၀၁၃ ခုနှစ် XIAMEN STONE Fair (03 / 06-03 / 09)
ထုတ်ကုန်များတွင် linear လျှောလမ်းကြောင်း၊ စိုစွတ်သောလေတွင်းအပေါက်တူးခြင်း...
၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းသူများအကြားယုံကြည်မှုရှိစေရန်TÜV Rheinland Group ၏ "Corporate Identity...
အသစ်သော GP-SA50 ၏လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းသည်မည်သည့်စိုစွတ်သော၊ ရေနံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုအလွယ်တကူကောက်ယူနိုင်သည်။...
အသစ်သော GP-SA40 ၏လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းသည်စိုစွတ်သော၊ ရေနံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်ရှိအရာဝတ္ထုများအတွက်လျင်မြန်စွာနေရာယူနိုင်သည်။...